Mas'uuliyiin Hargeeysa lagu xiray ka dib musuq-maasuq lagu heley - Muqdisho Online
Home News Mas’uuliyiin Hargeeysa lagu xiray ka dib musuq-maasuq lagu heley
Mas’uuliyiin Hargeeysa lagu xiray ka dib musuq-maasuq lagu heley
Soomaaliland ayaa Maanta xirxirtay tira mas’uuliyiin ah,kuwaas oo lagu eedeeyay inay ku kaceen falal la xiriira musuq maasuq.
Mas’uuliyiinta la xirxiray ayaa waxaa ka mid ah Agaasimaha maamulka ee wasaaradda warfaafinta Soomaaliland Xasan Maxamuud, sida ay shaaciyeen ilo xog-ogaal ah oo ku sugan Magalada Hargeysa ee deegaanada Soomaaliland.
Sidoo kale dadka la xiray ayaa waxa ku jira Agaasimihii hore ee wasaaradda warfaafinka Cismaan Xuseen, kaas oo dhawaan sheegay in uu xilkaasi iska casilay,isla markaana Madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi uu ka aqbalay iscasilaada.
Arintan ayaa ka danbeysay baaritaan musuqmaasuq oo maalmahanba ay xafiiska hanti dhawrku ka waday dhowr hay’adood ay warfaafintu ka mid tahay,hayeeshee tallaabadaan ayaanan weli aysan ka hadlin madaxda sare ee Soomaaliland.
Previous articleJubbaland oo diiday Go’aan kasoo baxay DFS (Ogoow sababta)
Next articleImaaraadka oo laga Masaafuriyay nin soo dhaweeyay Dadkii lagu xasuuqay New Zealand